Hiran State - News: Wasiirka Warfaafinta Hiiraan State oo sheegay in loo baahanyahaya doorasho ka dhacda Somaliya.
Wasiirka Warfaafinta Hiiraan State oo sheegay in loo baahanyahaya doorasho ka dhacda Somaliya.
London:-Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Hiiraan State Amb A/qadir Abdulle Xooshow oo maanta shir dhinaca isgarsiinta ah kula yeeshay taageerayasha HS ayaa soo dhaweyey soo jeedintii QM ay soo jeedisay in ay doorashadu dhacdo ka hor bisha 8aad, isagoo hogaamiyayaasha Somaliya ku booriyey iney meel iska dhigaan qilaafka oo ay eegaan maslaxada umada Somaliyeed oo ah in wadankaan mudada 21 sano ah ku jira kumeel gaarka masuuliyad leyska saaro sidii uu uga bixi lahaa.
Mar uu ka hadlayey hanaanka ay u shaqeyso xukuamda Farmaajo ayuu sheegay ineysan isaga ula muuqan dowlad ee uu u arko koox isku ujeedo ah oo dantooda ilaashanaya, waayo ayuu yiri waxaad ka garan kartaa inta gobol iyo shacab Somaliyeed ay lumiyeen taageeradooda mudada ay jiraan.
Abm. Xooshow ayaa ugu baqay masuuliyiinta TFGda iney la yimadaan tanaasul guud si dalka iyo dadka loo bad baadiyo. halka uu mudanayaasha baarlamaanka Somaliya ugu baaqay iney soo doortaan hogaamiye wadani ah oo dadka iyo dalka isku soo dumin karo. isagoo u rajeeyey in uu muwaadinkaasi noqdo reer Hiiraan maadaama aanu Somali inteedii badneyd horey u soo tijaabinay bal markaan codsiba ha naga ahaatee bal baahasha nagu firiya meeshey nala gaartaba ayuu yiri isagoo kaftamayo.
Sida muuqata qeybaha kala duwan ee bulshada Somaliyeed ayaa aad ugu hamuun qaba sidii uu wadankooda mar uun uga bixi lahaa kumeel gaarkan oo maanta hadii ay shacabku fahamsanaan lahaayen dib u dhaca ku habsaday mudadii kumeel gaarka ay adkaan laheyd in korkooda leysku qilaafo.
Sanadkii waxaa dalk Somaliya laga xadaa ku dhawaad 100 caruur ah oo looga faa'ideystay colaadahan aan dhamadka laheyn ee wadanka ka jiro iyo dowladahaan 4ta sano oo kaliya inta la dhiso la leeyahay waa kumeel gaar.halka xukuamda Farmaajo doorasho wax ka yar 5 saacadood lagu qaban karo ku andacooneyso sanad hor leh ha nala siiyo iyagoo aan wax doorasho ah marin.
· admin on May 12 2011 18:33:16 · 0 Comments · 1934 Reads ·
14,667,263 unique visits